Maxaa laga filan karaa Beesha Caalamka oo si dhaw ula socotay shirkii fashilmay ee Garoowe? – Somali Top News
Maxaa laga filan karaa Beesha Caalamka oo si dhaw ula socotay shirkii fashilmay ee Garoowe?
May 12, 2019 Somali Top News	0 Comments
Xubno kor-joogto ah oo ka socday beesha caalamka oo si dhaw ula socday Shirka Garowe kuwaa oo si aad ah u daneynaya arrimaha Soomaaliya ayaa waxey warbixin shirka ku saabsan oo ay ka muuqatay rajo xumo natiijada Shirka waxey warbixin ka siiyeen beesha Caalamka in labada hoggaamiye ee Jubbaland iyo Galmudug ay si cad uga biya-diideen in Shirku sii socdo, ayna caqabad ku noqdeen.
Waddamada iyo hey’addaha daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa iyaga oo ku salaynaha warbixinta ay ka heleen xubnaha la socday shirka, waxaa la filayaa in ay go’aan kasoo saaraan Shirka Garoowe.
Wararka ayaa sheegaya in labadii maalin ee u dambeysay dhawr jeer ay Safiirrada Mareykanka iyo Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya la xiriireen Xaaf iyo Axmed Madoobe si ay ugu qanciyaan in Shirku sii socdo oo natiijo laga gaaro.
Beesha caalamka ayaa qabta in haddii khilaafku sii fogaado uu saameyn weyn ku yeelan karo dowlad dhiska Soomaaliya iyo rajada shacabka Soomaaliyeed.
Axmed Madoobe oo ku laabtay Kismaayo iyo Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) oo u duulay Nayroobi ayaa labaduba waxa ay sheegeen in Dowladdu aysan diyaar ahayn in ay tanaasul sameyso oo ay shirka fashilisay, hase yeeshee wararka Allbanaadir ay heshay waxa ay sheegayaan in Beesha caalamku damacsan tahay in culeys xoog leh ay saarto labada Madaxweyne ee Shirka ka carooday.
Beesha caalamka ayaa dadaal badan ku bixisay sidii la isugu keeni lahaa Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Dowladda dhexe, iyada oo waliba hoggaanka dowladd dhexe ku cadaadisay in ay Garoowe tagaan iyaga oo dowladda dhexe u arkayay in ay diidan tahay in ay maamul goboleedyada la xaajooto balse hadda taas badalkeeda ayaa u muuqata.
Waxaa laga yaabaa in Maamul Goboleedyada Hirshabeele, KoofurGalbeed, Puntland iyo Dowladda dhexe ay war kasoo saaraan Garoowe, taas oo ay dheertahay warbixinta beesha caalamka ee sida hor dhaca ah loogu eedeeyay Maamullada Galmuug iyo Jubbaland.
← Axmad Madoobe oo ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday garoonka magaalada Kismaayo
Warar dheeraad ah oo laga helay Eng lagu dilay magaalada Muqdisho →
Donald Y. Yamamoto “ Nabadda Geeska Africa waxey ku xerantahay Soomaaliya ”
Shacab ku nool Puntland oo ka banaabxay xukun dil oo lagu riday Askari dil ku lug lahaa
Puntland oo qaaday taloobin looga hor tagayo cudurka Coronovirus
March 30, 2020 March 30, 2020 Somali Top News 0